Dzimba dzeFrench Champagne dzinopemberera gore rekurekodha nekuda kwekubhururuka
Location: musha » Kutumira » Waini & Midzimu » Dzimba dzeFrench Champagne dzinopemberera gore rekurekodha nekuda kwekubhururuka
Yese yekutakura Champagne yakasvetuka 32% kusvika 322 miriyoni mabhodhoro, zvisinei nemhedzisiro yeCCIDID-19 denda kuvharika, izvo zvakakonzera kuvharwa kwemabhawa mazhinji nemaresitorendi.
Vagadziri veFrench champagne vanotengeserana nesangano rekodhi rekodhi rekodhi 2021 bubbly kutengesa uye kutumira kunze svondo rino.
Le Comité Interprofessionnel du vin de Champagne, iyo inomiririra vanopfuura zviuru gumi nezvitanhatu varimi vewaini vekuFrance uye 16,000 dzimba dzechampagne, yakazivisa izvozvo. Furanzi yakatumira kunze kwenhoroondo yakakwira mabhodhoro echampagne miriyoni zana nemakumi masere muna 180, inova kuwedzera kwe2021% zvichienzaniswa ne38.
Yese yekutakura yakasvetuka 32% kusvika 322 miriyoni mabhodhoro, zvisinei nekunonoka kweCCIDID-19 denda kuvharika, izvo zvakakonzera kuvharwa kwemabhawa mazhinji nemaresitorendi.
Pakazere, kutengesa kwepasirese kwakabata rekodhi inosvika mabhiriyoni matanhatu emadhora.
"Kupora uku kunoshamisa kwevanhu veChampagne mushure mekutambudzika kwa2020 (nenhamba dzakadzikira ne18%) nekuvharwa kwemapoinzi makuru ekushandisa uye kushomeka kwezviitiko zvemhemberero pasirese," akadaro Maxime Toubart, mubatsiri. mutungamiri we Le Comité Interprofessionnel du vin de Champagne.
Sangano rakataura kuti kudiwa kwakatanga kuwedzera zvishoma nezvishoma muna Kubvumbi 2021, vachitsanangura shanduko nenyaya yekuti "vatengi vakasarudza kuzvivaraidza pamba, vachitsiva kusurukirwa kwakawanda nenguva nyowani dzekugara uye kugovana."
'Champagne' izita rakasarudzika remhando inoshandiswa kune waini inogadzirwa mukati Furanzi's Champagne region, kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweParis. Varimi vewaini yeChampagne vakaita gore rinonetsa muna 2021, nenzvimbo yakarohwa nechando chakanyanya muchirimo, icho chakakuvadza 30% yechirimwa, ukuwo mildew yakakonzera kurasikirwa kwekusvika makumi matatu muzana.
Covid-19 COVID-19 dambudziko Furanzi
Iyo New Northern Pacific Airways ichange iine chitarisiko cheAlaska
Chikafu Chikuru cheSeafood Dish: Hove Inobhururuka uye Cou Cou kubva kuBarbados
Maguta epamusoro-soro pasi rose emahotera...
New Clinical Muedzo weCeliac Disease
Kubhururuka kusingamire kubva kuHonolulu kuenda kuAuckland kuHawaiian...
Gurukota rezvekushanya kweItaly Roparura Matanho Matsva ekuita ...
Muhwina Mubairo weGrammy Anoisa Danho paMoto muBarbados
Sachigaro weAPO Group akagadzwa kuva Advisory Board ye...
Zvitsva Zvitsva muVarwere Vegomarara Repazamu Vari Kutambura ne...
Mutungamiri weTanzania ari muRoyal Tour ku...
Ibuprofen API Market Development Status, Makwikwi...
The St. Regis San Francisco Inogadza Mikey Adams se...